Fifandimbiasam-pifanentanana Twitter vaovao @NativeLangsTech hampirohondrohona ny feon’ireo mpikatroky ny tenin-janatany · Global Voices teny Malagasy
Tetikasa miaraka amin'ny fitenin'ny vondrom-piarahamonina vazimba ao Etazonia sy Canada
Voadika ny 14 Mey 2019 7:49 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Esperanto , Español, Italiano, English
fandravahana mashup noforonin'i Eddie Avila, mampiasa vorom-pamantarana nataon'i Sara Novovitch, ES sy ny sarim-bolabola nataon'i Erik Arndt ao amin'ny Noun Project.
Manomboka amin'ny alakamisy 16 mey ho avy izao, hisy ny lisitra amin'ny fikatrohana nomerika ara-piteny avy amin'ny vazimba teratany amerikana sy ireo firenena voalohany (Amerindiana) avy ao Canada sy i Etazonia hifehy ny kaonty Twitter @NativeLangsTech. Narindran'ny Rising Voices sy ny Endangered Languages Project, haka toerana ao anatin'izao taona iraisampirenena 2019 ho an'ny fiteny vazimba teratany (indizeny) ity fanentanana amin'ny media sosialy ity ary hanome sehatra ho an'ireo feo isankarazany manerana ny faritra hizara ny traikefan-dry zareo amin'ny famelomana aina vao indray ny fitenin-dry zareo.
Mandritra izao taona 2019 izao ny mpikatroka isankarazany no hifandimby hizara ny fomba fijeriny ao amin'ny @NativeLangsTech ny dikan'ny fitenin-janatany ho azy ireo sy ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo. Miasa ho amin'ny fampiroboroboana ny fiteniny avokoa ireo mpikatroka ireo any amin'ireo sehatra vaovao tahaka ny aterineto, izay ahitana fidanadanana sy fanamby maro. Fa misy ihany koa ny fangaro ivelan-tserasera mifandraika amin'ny tantaram-pahavitrihan-dry zareo mijoro maharitra izay miantraika amin'ny herim-pahaveloman'ny fitenin-janatany sy firenena voalohany (vazimba).
Andalam-panatontosana izany ihany koa ny fananganana asa mampiasa Twitter ho fitaovam-pampitam-baovao hita ao Amerika Latinina (@ActLenguas) sy eto Afrika (@DigiAfricanLang), fa hitantoka amin'ireo fiteny ao Etazonia sy Canada kosa ity tetikasa ity.
Tsara dia tsara tokoa ny valiny tamin'ny antso handraisana anjara, fa efa feno sahady ny fandaharam-potoana ho an'ireo herinandro voalohany maromaro. Efa miezaka ihany koa izahay eny an-kianja hanasa ny hafa handray anjara.
Misy ireo mpandray anjara sasany hizara ny tantaram-piainany manokana mifandraika amin'ny asa fanomezana aina indray ny fiteny ka hifantoka manokana amin'ny anjara toeran'ny aterineto sy ny teknolojia amin'ity asa goavana ity. Ny hafa kosa misolo tena ny fikambanany, ny fokony, ny fireneny izay efa ela nanoloran-tena hiantoka fa hiampita any amin'ny taranaka hoavy ny fitenin-dry zareo. Ahitana ny fandraisana sy fampanaraham-bolontany ireo teknolojia nomerika mba hifanaraka amin'ny filàn-dry zareo ny sasany amin'ireo tetikadim-panomezana aina indray.
Izy rehetra ireo samy mazoto hizara ireo tantara ireo amin'ny olona mety ho mahalala kely dia kely monja momba ny fitenin-janatany na firenena voalohany ao Etazonia sy Canada, sy amin'ireo mpikatroky ny vondrom-piarahamonina hafa izay hahita ny akon'ireny tantara ireny amin'ny amin'ny zavatra iainany manokana, sady hianatra ihany koa ny sehatra tsy manam-paharoa ireo faritra hafa sy ny zavatra iainany manokana.
Efa ahitana ireto olona manaraka ireto ny nana sonia handray anjara hitantana ny kaonty:
George Ironstrack (Myaamiaataweenki ‘fiteny Miami’)
Ohatra fotsiny amin'ny sasany amin'ireo olona ho eo anivon'ity fanentanana ity hizara ny tantaran'ireo asa mifandraika amin'ny fiteny manerana an'i Etazonia sy i Canada ihany izany. Tsidiho ny pejy fanentanana hijerena ny fandaharam-potoana amin'izao fotoana izao, ary manaraha anay hatrany hamaky ireo lahatsoratra bilaogy fohy ahitana ny mombamomba ireo vahiny tsirairay.
Izao tetika media sosialy izao dia aingam-panahy avy amin'ny fandraisana an-tanana toy ny @IndigenousX ao Aostralia, izay nanoloran'ny mpanorina azy io, antsoina hoe Luke Pearson, taridalana lehibe amin'ireo dingana arahina. Ny kaonty Instagram an'ny Global Voices ihany koa efa tantanin'ny lisitry ny mpikambana ato amin'ny vondrom-piarahamonina ary fomba iray tsara dia tsara hamantarana izay ao anatin'ireo mpikambana maro isan-karazany ireo sy ny toerana iainan-dry zareo.
Azonao atao ny manohana ity fanentanana ity amin'ny alalan'ny fanarahana ny kaonty @NativeLangsTech mandritra ny taona 2019, sy amin'ny alalan'ny mampita ny hafatra (retweet) hitanao ho manome aingam-panahy mahaliana. Havitrika ihany koa ny vahiny hanao domberina ary hanao izay tsara indrindra hamaliana.